High Quality SYGAV 10.2″ Android car stereo radio ho an'ny 2013-2018 Toyota RAV4 / Wireless CarPlay WiFi Bluetooth orinasa sy mpanamboatra | SYGAV
SYGAV 10.2 ″ radio stereo fiara Android ho an'ny 2013-2018 Toyota RAV4 / Wireless CarPlay WiFi Bluetooth
Vidiny: USD $551.99
Inona no tsara amin'ny efijery lehibe Android an'ny fiara? Misy navigateur finday manana izany
Ny tombony amin'ny fitetezana finday dia tsy inona fa ny fanavaozana sari-tany haingana, ny toerana marina ary ny fitetezana matihanina. Mazava ho azy fa tsy manan-kery ireo ho an'ny fitetezana fiara tany am-boalohany, fa ho an'ny efijery Android lehibe an'ny fiara dia "tsy misy dikany" fotsiny izany.
Rehefa dinihina tokoa, dia ny efijery lehibe amin'ny rafitra Android. Ny AutoNavi Maps sy Baidu Maps izay matetika ampiasaina amin'ny fitetezana finday dia azo apetraka mora foana tsy misy fahasarotana, ary mazava ho azy fa manana ny endri-javatra mitovy amin'ny fanavaozana sari-tany haingana, ny toerana marina ary ny fitetezana matihanina toy ny fitetezana finday.
Ankoatra izany, amin'ny maha-rafitra Android azy, ny ankamaroan'ny fampiharana eny an-tsena dia azo apetraka amin'ny sitrapony. Raha toa ka mahazaka 4G ihany koa ny efijery lehibe an'ny fiaranao, dia tsy hisy adin-tsaina ny fijerena horonan-tsary sy fifampiresahana amin'ny WeChat, ary ho mahaliana kokoa ny dia.
Mazava ho azy fa satria be dia be ny APP azo lalaovina. Amporisihina ianao hisafidy ny dikan-teny 2G RAM araka izay azo atao rehefa mividy fiara lehibe Android. Raha ny marina, ny haben'ny RAM dia misy fiantraikany lehibe amin'ny hafainganam-pandehan'ny milina, ary tsara kokoa noho ny 1G. Ny RAM an-jatony vitsivitsy fanampiny dia afaka mitondra traikefa hafa tanteraka.
Ankoatra izany, ny scalability ny Android efijery lehibe ny fiara dia mihoatra lavitra noho ny an'ny finday. Ny finday rahateo dia vahiny amin’ny fiara. Ho fanampin'ny fanohanana ny fitetezana sari-tany, ny fijerena horonan-tsary, ny fifampiresahana amin'ny WeChat sy ny fiasa hafa, ny telefaona finday dia manohana ihany koa ny interface voatokana maro, izay afaka manampy fanamafisana maro azo ampiharina, toy ny fanaraha-maso ny tsindry amin'ny kodiarana, ny famerenana sary, ny sarintany finday, sns. ny efijery lehibe Android ny fiara dia tsy isalasalana fa hanatsara ny traikefan'ny fiara.
teo aloha: SYGAV 10.2″ radio stereo fiara Android ho an'ny Toyota Highlander 2008-2014 tsy misy Navigation Factory tsy misy OEM JBL amp / Wireless CarPlay WiFi Bluetooth
Manaraka: SYGAV 10.2″ radio stereo fiara Android ho an'ny 2015-2019 Toyota Highlander / Wireless CarPlay WiFi Bluetooth
Radio stereo fiara SYGAV Android ho an'ny 2008-2017 Mi...